Warshadaha Taxanaha Qalabka Xidhmada Maaskarada - Shiinaha Soosaarayaasha Qalabka Xidhmada Qalabka iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Nooca OK-100 Maska Mashiinka Kartoonada Si Toos ah loogu Sameeyo
OK-102 Nooca Maaskaro otomaatiga kiiska otomaatiga ah
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1.Mashiinkaan waxaa si gaar ah loogu talagalay Baakadka xirxirida kiiska si otomaatig ah; Qabanqaabada 2.Carton waa la habeyn karaa, alaabooyin isdabajoog ah oo si toos ah u sameysmaya. 3.It waxay qaadataa habka xirxirida kiiska jiifka ah, si toos ah u furaya una dhigaya kartoonka dhinaceeda, iyo hubinta si habsami leh u xirxiraya, ma leh kartoon xayndaab ah. 4.Widex ballaaran oo arji ah; la kulmi karaa dhammaan noocyada wax soo saarka. 5.Far-gees qalab wax lagu xidho machine Mashiinka xabagta dhalaaliya kulul lagu dari karaa oo loo habeyn karaa. ...
OK-208 Mashiinka Xidhmada Nooca Maaskaro
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka Mashiinka waxaa lagu xakameynayaa isku-beddel laba jibbaar ah, dhererka bacda ayaa la dejiyaa isla markaana isla markiiba la gooyaa, hal tallaabo oo meel ah, badbaadi waqtiga iyo filimka.Human-mashiinka is-dhexgalka, dejinta mitirka habboon oo dhakhso leh Ciladda is-ogaanshaha cilladda, muujinta cilladda ayaa muuqata. Dareenka sare ee dareeraha sawirka korantada calaamadda midabka, darajada dhijitaalka ee darajada dijitaalka, ka dhig booska goynta xirashada mid sax ah. Xakamaynta PID-da madaxbannaan ee heer-kulka ayaa ka wanaagsan in lala qabsado a ...
OK-902 Nooca Maaskarada Xidhmada Mashiinka Mashiinka
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaabeynta quudinta otomaatiga ah, samaynta bacda iyo baakadaha alaabada dhammaantood si otomaatig ah ayey u dhammaystiraan Habka asalka u furitaanka iyo sameynta boorsada hal abuurka ayaa sahleysa in la beddelo cabirrada. Waa xulasho habboon oo loogu talagalay baakadka otomaatiga ah ee hal ama dhowr waji. Moodel & Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah Model OK-902 Xawaare (bacaha / min) 30-50 kiish / min cabbirka Mashiinka (mm) 5650mm (L) X16500mm (W) x2350mm (H) Miisaanka Mashiinka (kg) 4000kg Power sup ...